China LiB3O5 (LBO) Crystal Mugadziri uye Mutengesi | Dien
Chimiro cheCrystal: Orthorhombic, Space boka Pna21, Point boka mm2
Lattice Paramende: a = 8.4473Å, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2
Kunyorera Point: Nezve 834 ℃
Mohs Kuomarara: 6
Kuwandisa: 2.47g / cm3
Thermal Kuwedzera Coeficients: αx = 10.8x10-5 / K, αy = -8.8x10-5 / K, αz = 3.4x10-5 / K
LBO (Lithium Triborate - LiB3O5) ikozvino ndiyo inonyanya kushandiswa zvinhu zveChipiri Harmonic Generation (SHG) ye1064nm yakakwira magetsi lasers (inotsiva KTP) uye Sum Frequency Generation (SFG) ye1064nm laser sosi yekuwana UV mwenje pa355nm .
LBO chikamu chinowirirana neiyo SHG uye THG yeNd: YAG uye Nd: YLF lasers, uchishandisa chero mhando I kana mhando II kudyidzana. Kune iyo SHG pakamuri tembiricha, mhando I chikamu chinowirirana chinogona kusvikwa uye ine yakanyanya kushanda inoshanda SHG coefficient mune chikuru XY uye XZ ndege mune yakafara wavelength renji kubva 551nm kusvika ingangoita 2600nm. SHG kushandurwa kwehunyanzvi kweanopfuura 70% ekupomba uye 30% yec Nd: YAG lasers, uye THG kutendeuka kushanda pamusoro pe60% yepulse Nd: YAG laser yakaonekwa.
LBO yakanakisa NLO kristaro yeOPOs uye maOPA ane rakanyanya kugadziriswa wavelength renji uye masimba epamusoro Aya OPO uye OPA ayo anoputirwa neiyo SHG uye THG yeNd: YAG laser uye XeCl excimer laser pa308nm zvakataurwa. Izvo zvakasarudzika zvimiro zverudzi I uye mhando II chikamu chinowirirana pamwe neNCPM inosiya imba hombe mukutsvaga nekushandisa kweLBO's OPO uye OPA.
• Rakajeka rweruzhinji kubva pa160nm kusvika 2600nm;
• Yakakwira Optical homogeneity (δn≈10-6 / cm) uye isina kusunganidzwa;
• Yakakura kwazvo inoshanda SHG inokwana (kanokwana katatu iyo yeKDP);
• Kukwirira kwakanyanya chikumbaridzo;
• Wide yekugamuchira kona uye diki kufamba-kubva;
• Type I uye mhando II isiri-yakakosha chikamu inowirirana (NCPM) mune yakafara wavelength renji;
Spectral NCPM padyo ne1300nm.
• Inopfuura 480mW kuburitsa pa395nm inogadzirwa nekuwanda kwakapetwa ne2W modhi-yakavharwa Ti: Sapphire laser (<2ps, 82MHz). Iyo wavelength renji ye700-900nm yakafukidzwa ne5x3x8mm3 LBO crystal.
• Kupfuura 80W kuburitsa girini kunowanikwa neSHG yeQ-switch Nd: YAG laser mune yerudzi II 18mm refu LBO kristaro.
Kuwanda kwekaviri kwedhodhi rakapomerwa Nd: YLF laser (> 500μJ @ 1047nm, <7ns, 0-10KHz) inosvika pamusoro pe40% yekushandurwa kwekuita mune 9mm yakareba LBO kristaro.
• Iyo VUV inoburitsa pa187.7 nm inowanikwa ne sum-frequency chizvarwa.
• 2mJ / pulse diffraction-limited danda pa355nm inowanikwa ne intracavity frequency katatu katatu Q-switched Nd: YAG laser.
• Yakanyanya kukwirira kwese kutendeuka kushanda uye 540-1030nm tunable wavelength renji yakawanikwa neOPO yakapomedzerwa pa355nm.
Rudzi rweI OPA rwakapomerwa pa355nm nepombi-ku-chiratidzo chekushandurwa kwesimba kwe30% yakataurwa.
Rudzi rwechipiri NCPM OPO rwakaputirwa neXeCl excimer laser pa308nm yakawana 16.5% kutendeuka kwekuita, uye zvine mwero tunable wavelength mabara anogona kuwanikwa neakasiyana mapombi masosi uye tembiricha kugadzirisa.
Nekushandisa nzira yeNCPM, nyora I OPA yakadhonzwa neiyo SHG yeNd: YAG laser pa532nm yakaonekwawo kuvhara yakakura tunable renji kubva 750nm kusvika 1800nm ​​nekupisa tembiricha kubva ku106.5 kusvika 148.5 ℃.
Nekushandisa mhando II NCPM LBO se optical parametric jenareta (OPG) uye nyora I chakakomba chikamu-chakafanana BBO seOPA, yakamanikana linewidth (0.15nm) uye yakakwira pombi-kune-chiratidzo simba rekushandura simba (32.7%) yakawanikwa painopurwa ne4.8mJ, 30ps laser pa354.7nm. Wavelength tuning renji kubva pa482.6nm kusvika 415.9nm yakafukidzwa pamwe nekuwedzera tembiricha yeLBO kana nekutenderera BBO.
Orthorhombic, Space boka Pna21, Point boka mm2
Nezve 834 ℃
Thermal Kuwedzera Coeficients
Thermal Kuitisa Coefficients
SHG Chikamu Chinoenderana Range
551-2600nm (Rudzi I) 790-2150nm (Rudzi rwechipiri)
<0.1% / cm pa1064nm <0.3% / cm pa532nm
7.5 ℃ · cm (Rudzi rwechipiri, 1064 SHG)
1.3nm · cm (Rudzi rwechipiri, 1064 SHG)
0.60 ° (Rudzi I 1064 SHG)
0.12 ° (Rudzi rwechipiri 1064 SHG)
Dimension shiviriro (W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.5 / -0.1mm) (L≥2.5mm) (W ± 0.1mm) X (H ± 0.1mm) X (L + 0.1 / -0.1) mm) (L <2.5mm)
Bvisa kuzarura yepakati 90% yehupamhi Hapana nzira dzinooneka dzekuparadzira kana nzvimbo kana ichiongororwa ne50mW green laser
Flatness pasi pe λ / 8 @ 633nm
Kutamisa kumberi kukanganiswa pasi pe λ / 8 @ 633nm
Kukanda / Kuchera zvirinani pane gumi / 5 kusvika MIL-PRF-13830B
Kufananidza zvirinani pane makumi maviri masekondi masekondi
Perpendicularity ≤5 arc maminetsi
Kushivirira kweAngle △ -0.25 °, △0.25 °
Kukuvadza chikumbaridzo [GW / cm2] > 10 ye1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (yakabwinyiswa chete)> 1 ye1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-yakavharwa)> 0.5 ye532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-yakavharwa)